सिरहा/ आफ्नै दाजुको साली (नाम परिवर्तन) कियालाई विष्णुपुर गाउँपालिका–१ बस्ने रविन्द्र पासमानले प्रेम विवाहको नाउँमा यौन शोषण गर्दै पछिल्लो समय अरु केटीसँग विहे गर्न लाग्दा न्याय माग्दै पिडित युवती सिरहा जिल्ला अदालत गुहारेकी छन् ।
अन्दाजी डेढ वर्ष अगाडि बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका यौन प्यासी रविन्द्रले मोवाइल र यौठी जस्ता अनेकौं उपभोग्य सरसमान दिएर कियलाई प्रेम जालमा फसायो । ‘विदेश जानु अघि देखि राम्रोसँग चिनजान भइरहेको थियो,’ कियाले भनिन्,‘विदेशमा हुँदा पनि धेरै फोन गथ्र्यो । फोन नगर्नुभन्दा पनि फोन गरिरहदा रविन्द्रको भित्रि कुरा पत्ता लाग्यो । राम्रोसँग चिनेको र आफ्नै स्वजाति परेको हुँदा राम्रै हुन्छ भन्ने सोचेको थिए ।’
‘विश्वास जित्नका लागि रविन्द्रले गोप्य रुपमा विहे पनि ग¥यो । मलाई उसले आफ्नो घर पनि लग्यो । म केही दिन उसको घरमा बसे,’ किया भन्छिन्,‘सम्बन्ध पुरानो हुँदै जाँदा रविन्द्रले कुव्यवहार गर्न थाल्यो ।’ विभिन्न वहाना लगाएर आफ्नो अभिभावकसँगको मिलोमतोमा रविन्द्रले अरु केटीसँग विहे गर्न लागेको कुरा सुनिएको कियाले बताइन् ।
‘म हुँदा हुँदै अरु केटीसँग विहे किन ? मेरो जीवन बर्वाद गर्न तम्सीनु भएको किन ? रविन्द्रले मेरो प्रश्नमा भने तिमि आफ्नो बाटो लाग्नु म आफ्नो अभिभावकको साथ लाग्छु,’ किया भन्छिन्,‘मेरो विश्वास जित्नको लागि रविन्द्रले आफ्नो हातमा काटेर मेरो र उसले आफ्नो नामको पहिलो अक्षर आर.के लेखेको छ ।’
‘सुरुमा रविन्द्रले भन्थ्यो तिमि मसँग विहे गर्दैनौं भने तिम्रै घरमा आत्महत्या गरेर फसाई दिन्छु । तिमिले मसँग विहे गर्नैपर्छ । तिमि कहाँ बस्छौं । के लिन्छौं त्यो दिन्छु । यसरी सम्बन्ध बनायो,’ किया भन्छिन्,‘मबाट छुट्निु केही दिन अगाडि रविन्द्रले मेरो मोवाइल फोरमेट गर्ने नाउँमा मोवाइलमा भएको सबै फोटो र अरु प्रमाण नष्ट ग¥यो । पत्नी बनाएर वर्षौ देखि राखेर अरु केटीसँग विहे गर्न खोजेर ममाथि अन्याय गर्दै छन् । दिनमा मात्र नभई रातीको १२÷२ बजे घण्टौं फोन गथ्र्यो ।’
न्याय पाउँ भनी विष्णुपुर गाउँपालिकामा उजुरी गर्दा खासै वास्ता नगरेको उनले सुनाइन् । ‘पहिलो दिन विष्णुपुरमा भएको छलफलमा रविन्द्र पक्षधर केही बिचौलियाहरुले हुटिङ्ग गरेर छलफललाई भन्द्रगोल बनायो । दोश्रो दिनको छलफलमा नभएकै कुरा लेखेर सही गराई ओझेलमा पार्न खोज्दा आफु त्यहाँबाट भागेर जिल्ला अदालत, प्रहरी,अधिकारकर्मी र अन्य न्यायिक निकाय गुहारे ।’
रविन्द्र अहिले पनि राख्ने पक्षमा रहेको तर उनको अभिभावक र केही बिचौलिया प्रवृतिका व्यक्तिले नकारात्मक भुमिका खेल्दा समस्या उत्पन्न भएको कियाले दावी गरिन् । कानूनी परामर्शकर्ता नियुक्ति नभएको हुँदा ठोस निकास दिन नसकेको विष्णुपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अरहुला देवी सिंहले बताइन् । ‘घटना भएकै छ,’उनी भन्छिन,‘पिडितले न्याय पाउनुपर्छ ।’
‘कुनै पनि हालतमा विहे गर्दिन । यसलाई पावर लगाएरै तह लगाइदिन्छु,’ उनी भन्छन्,‘अरु केटी, नयाँ मोटरसाइकल र केही रकम पनि आउने पक्का भइसक्यो । अब योसँग केही लिनु छैन् । जे लिनु र दिनु थियो त्यो सबै भइसक्यो ।’
रविन्द्रले दोश्रो केटीसँग गर्न लागेको विवाह बालविवाह भइरहेको चर्चाको बिषय बनेको छ । २५ बर्षिय रविन्द्रले १४ वर्षिय केटीसँग विवाह गर्न लागेको स्थानीयमाझ चर्चा चलको हो । बैशाखभित्रै विहे गर्ने भनी रविन्द्रले योजना बनाएको छ ।